Nehemia 8 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
KENKAN WƆ Afrikaans Albanian American Sign Language Amharic Arabic Argentinean Sign Language Armenian Armenian (West) Australian Sign Language Austrian Sign Language Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Karo) Batak (Toba) Belgian French Sign Language Bengali Bicol Bislama Bolivian Sign Language Brazilian Sign Language British Sign Language Bulgarian Cambodian Cebuano Chichewa Chilean Sign Language Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chinese Sign Language Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Colombian Sign Language Costa Rican Sign Language Croatian Croatian Sign Language Cuban Sign Language Czech Czech Sign Language Danish Dutch Dutch Sign Language Ecuadorian Sign Language Efik English Estonian Ewe Fijian Filipino Sign Language Finnish French French Sign Language Ga Galician Georgian German German Sign Language Ghanaian Sign Language Greek Greek Sign Language Guarani Guatemalan Sign Language Gujarati Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hindi Hiri Motu Honduras Sign Language Hungarian Hungarian Sign Language Igbo Iloko Indian Sign Language Indonesian Indonesian Sign Language Irish Sign Language Isoko Israeli Sign Language Italian Italian Sign Language Jamaican Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kannada Kazakh Kenyan Sign Language Kikaonde Kikongo Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kongo Korean Korean Sign Language Kosraean Latvian Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Macedonian Madagascar Sign Language Malagasy Malawi Sign Language Malay Malayalam Malaysian Sign Language Maltese Marathi Maya Mexican Sign Language Mozambican Sign Language Myanmar Navajo Nepali New Zealand Sign Language Nias Nicaraguan Sign Language Nigerian Sign Language Norwegian Nzema Oromo Ossetian Otetela Panamanian Sign Language Pangasinan Paraguayan Sign Language Pennsylvania German Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (Portugal) Portuguese Sign Language Punjabi Quebec Sign Language Quechua (Ancash) Quechua (Ayacucho) Quechua (Huallaga Huánuco) Romanian Russian Russian Sign Language Salvadoran Sign Language Samoan Sango Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Shona Silozi Sinhala Slovak Slovak Sign Language Slovenian Slovenian Sign Language South African Sign Language Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Swedish Sign Language Swiss German Sign Language Tagalog Tahitian Taiwanese Sign Language Tajiki Tamil Tatar Telugu Tetun Dili Thai Thai Sign Language Ticuna Tigrinya Tok Pisin Tongan Tshiluba Tsonga Tswana Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Uruguayan Sign Language Uzbek Uzbek (Roman) Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Waray-Waray Xavante Xhosa Yoruba Zambian Sign Language Zimbabwe Sign Language Zulu
Wɔkan Mmara no kyerɛkyerɛɛ mu kyerɛɛ ɔman no (1-12)
Wodii Apata Afahyɛ no (13-18)
8 Ɔman no nyinaa boaboaa wɔn ho ano wɔ abɔnten wɔ Nsu Pon+ no anim. Ɛnna wɔka kyerɛɛ ɔkyerɛwfo* Esra+ sɛ ɔmfa Mose Mmara+ nhoma a Yehowa de maa Israel no+ mmra. 2 Enti bosome a ɛto so ason no da a edi kan no,+ ɔsɔfo Esra de Mmara no baa bagua no anim.+ Saa bere no, na mmarima ne mmea ne obiara a ɔte asɛm a otumi te ase ahyia. 3 Na ɔkenkan no den+ abɔnten wɔ Nsu Pon no anim fi ahemanakye kosii awia,* wɔ mmarima ne mmea ne nnipa foforo a wotumi te nneɛma ase no anim; na ɔman no nyinaa yɛɛ aso tiee+ Mmara nhoma no mu nsɛm. 4 Na ɔkyerɛwfo Esra gyinaa apa a wɔde nnua ayɛ ama nhyiam no so; wɔn a na wogyinagyina ne nifa so ne Matitia, Sema, Anaia, Uria, Hilkia, ne Maaseia, na wɔn a na wogyinagyina ne benkum so ne Pedaia, Misael, Malkiya,+ Hasum, Has-Badana, Sakaria, ne Mesulam. 5 Esra buee nhoma no mu maa ɔman no nyinaa hui, efisɛ na ɔwɔ soro sen wɔn nyinaa. Bere a obuee mu no, nnipa no nyinaa sɔresɔree. 6 Ɛnna Esra de ayeyi maa Yehowa, nokware Nyankopɔn no, Nea ɔyɛ kɛse no. Na ɔman no nyinaa gyee so sɛ, “Amen!* Amen!”+ Na wɔmomaa wɔn nsa so. Afei wɔkotow de wɔn anim butubutuw fam sɔree Yehowa. 7 Na Yesua, Bani, Serebia,+ Yamin, Akub, Sabetai, Hodia, Maaseia, Kelita, Asaria, Yosabad,+ Hanan, ne Pelaia, a wɔn nyinaa yɛ Lewifo no, kyerɛkyerɛɛ Mmara no mu kyerɛɛ ɔman no.+ Saa bere no nyinaa na ɔman no gyinagyina hɔ. 8 Wɔtoaa so kenkan nokware Nyankopɔn no Mmara nhoma no den, na wɔkyerɛkyerɛɛ mu maa emu daa hɔ fann, na wɔboaa ɔman no ma wɔtee nea wɔrekenkan no ase.+ 9 Nehemia a saa bere no na ɔyɛ amrado,* ne ɔsɔfo Esra+ a na ɔyɛ ɔkyerɛwfo, ne Lewifo a na wɔrekyerɛkyerɛ ɔman no ka kyerɛɛ wɔn nyinaa sɛ: “Ɛnnɛ yɛ da kronkron ma Yehowa mo Nyankopɔn.+ Munnni awerɛhow, na munnsu.” Nea ɛte ne sɛ, bere a ɔman no retie Mmara no mu nsɛm no, na wɔn nyinaa resu. 10 Ɔka kyerɛɛ wɔn sɛ: “Monkɔ nkodi mo aduan papa bi* na monnom adɔkɔdɔkɔde, na momfa bi+ nkɔma wɔn a wonni bi, efisɛ ɛnnɛ yɛ da kronkron ma yɛn Awurade. Enti mommma mo werɛ nnhow, na Yehowa mu anigye ne mo abannennen.”* 11 Lewifo no nso ka kyekyee nkurɔfo no nyinaa werɛ sɛ: “Munnyae su! Efisɛ ɛnnɛ yɛ da kronkron, enti mommma mo werɛ nnhow.” 12 Ɛnna nkurɔfo no nyinaa kodidii na wɔnomee, na wɔkyekyɛɛ bi maa afoforo, na wodii ahurusi kɛse+ efisɛ wɔtee nsɛm a wɔka kyerɛɛ wɔn no ase.+ 13 Na da a ɛto so abien no, agyanom mmusua mu mpanyimfo a wɔwɔ ɔman no mu nyinaa ne asɔfo ne Lewifo no boaboaa wɔn ho ano baa ɔkyerɛwfo Esra nkyɛn sɛnea ɛbɛyɛ a Mmara nsɛm no mu ntease a wɔanya no, wobenya bi aka ho. 14 Ɛnna wohui sɛ wɔakyerɛw wɔ Yehowa Mmara a ɔde faa Mose so no mu sɛ, sɛ Israelfo redi bosome a ɛto so ason no mu afahyɛ no a, wɔntenatena apata* ase,+ 15 na ɛsɛ sɛ wɔbɔ dawuru+ na wɔpae mu ka wɔ wɔn nkurow nyinaa mu ne Yerusalem baabiara sɛ: “Monkɔ mmepɔw no so nkɔpɛ ngodua mmaa, nku dua mmaa, ohuadua mmaa, berɛw, ne nnua foforo mmaa mfa mmɛbɔ apata sɛnea wɔakyerɛw no.” 16 Ɛnna ɔman no fii adi kɔpɛɛ bi bae, na wɔde bobɔɔ apata, obiara bɔɔ ne de wɔ ne dan atifi ne n’adiwo ne nokware Nyankopɔn no fi adiwo+ ne mmɔnten so wɔ baabi a ɛbemmɛn Nsu Pon+ no ne Efraim Pon+ no. 17 Enti wɔn a wɔasan aba wɔn man mu no nyinaa bobɔɔ apata, na wɔtenatenaa apata no mu. Efi Nun ba Yosua+ nna no mu besi saa da no, na Israelfo nyɛɛ saa da, na ɛma wodii ahurusi kɛse.+ 18 Na efi da a edi kan kosi da a etwa to no, da biara na wɔkenkan nokware Nyankopɔn no Mmara+ nhoma no; wodii afahyɛ no nnanson, na da a ɛto so awotwe no, wɔyɛɛ nhyiam titiriw sɛnea mmara no kyerɛ.+
^ Anaa “owigyinae.”
^ Anaa “Ɛnyɛ hɔ!”
^ Nt., “sradeduan.”